﻿	မိန်းမကိုယ်က အရည်ဆင်းတာများလာပါက ဘာလုပ်ရမလဲ? | Find My Method
မိန်းမကိုယ်က အရည်ဆင်းတာများလာပါက ဘာလုပ်ရမလဲ?
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ » အဝိုင်းကွင်း » မိန်းမကိုယ်က အရည်ဆင်းတာများလာပါက ဘာလုပ်ရမလဲ?
အဝိုင်းကွင်းကိုအသုံးပြုခြင်းမှ သင်ခံစားရသော အရည်ဆင်းခြင်းများသည် ပုံမှန်ဖြစ်နိုင်သည်။ လအနည်းငယ်အကြာမှာလျော့သွားသင့်ပါတယ်။ အဝိုင်းကွင်းသည် သင့်အား ဘက်တီးရီးယား vaginosis ခေါ် ရောဂါကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးနေခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
သင်စိုးရိမ်နေဆဲဖြစ်လျှင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ နှင့်တိုင်ပင်ပြောဆိုပါ။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ အကယ်၍ အရည်ဆင်းခြင်းသည် လအနည်းငယ်ကျော်ကြာပြီး သင်အမှန်တကယ်မနှစ်သက်ပါက အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကို အသုံးပြုရန်စဉ်းစားပါ။ ဆေးလုံး၊ ကပ်ခွာပြား၊ သို့မဟုတ် ထိုးဆေးကို ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရာသီပုံမှန်လာလိုလျှင် ဆေးလုံးနှင့် ကပ်ခွာြပားသည် ကောင်း၏။ သင့်ရာသီပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် မလာတော့ခြင်းကို လက်ခံနိုင်ပါက ထိုးဆေးသည်အကြံကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
အခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်-ကပ်ခွာပြား၊ ဆေးလုံး၊ ထိုးဆေး
SHINE SA. (2017). Contraceptive Vaginal Ring. မှရယူရန် https://www.shinesa.org.au/media/product/2015/04/Contraceptive-vaginal-ring.pdf